3ds max အကြောင်းသိကောင်းစရာ [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > ကွန်ပျူတာ ဆိုင်ရာ( Engineering အပါအ၀င်) > Graphic Design > 3D Studio Max > 3ds max အကြောင်းသိကောင်းစရာ
View Full Version : 3ds max အကြောင်းသိကောင်းစရာ
3ds maxအကြောင်းသိကောင်းစရာ လို.ခေါင်းစဉ် အသစ် တင်လိုက်တယ်နော်။ကျွန်တော်လဲလေ.လာတုန်းပါ။
ဒါပေမယ်. သူ.ရဲ. feature တော်တော်များကို အရင်လေ.လာထားပါတယ်။ဘာတွေ ကောင်းတယ်။ဘာတွေလေ.လာသင်.တယ်...စသဖြင်.ပေါ.။
ဘာလို.လဲ ဆိုတော. 3ds max သင်တန်း တက်၇င် ဘာတွေသင်မလဲ၊ဘယ်အထိတတ်အောင် သင်မလဲ ဆိုတာတွေမေးနိုင်ဖို.၊သိဖို.လိုမယ်လေ။
ပေး၇တာနဲ.ထိုက်တန်အောင် သင်ပေးမှာလား (or) ပေး၇တာထက် သင်ပေးမှာ များနေလား...စသဖြင် သေသေချာချာ စဉ်းစား သင်.ပါတယ်။
ပေးတာနဲ. ထိုက်တန်တဲ. သင်တန်းကြေး ဖြစ်ဖို. လိုပါတယ်။နည်းတိုင်း မကောင်း သလို များနေ၇င်လည်း သတိထား စဉ်းစားပါ။
ကျွန်တော် 3ds max သင်တန်းတွေ2ခု3ခုလောက် တတ်ဘူးပါ တယ်။လိုချင်သလောက် မတတ်ပါ ဘူး...selfstudy ဘဲ လုပ် ၇တာပါပဲ။
ပြောချင်တာ က တစ်ကယ်. အခြေခံကောင်း လဲမရ further study လုပ်ဖို. လဲ Guide မလုပ်ပေး နိုင် အချိန်နဲ. ငွေဘဲ ကုန်တာပါပဲ။
နောက် လူတွေကို ကိုယ်.လိုမကြုံစေချင်လို.ပါ။
ကဲနောက်နေ.တွေကြ၇င် ပြောမယ်နော်။Admin လူကြီးတွေလဲ ခေါင်းစဉ် သစ် အတွက် အဆင်မပြေ၇င် ပြောပါနော်။
ဆွေးနွေးချက်တွေကို စောင့်နေပါတယ်ဗျာ။ :)
ဟုတ်တယ် ကိုဆန်းရေ ...3ds မှာ modeling နဲ. rendering ၊Animation တွေလုပ်လို.၇ပါတယ်။အ၇င်တုန်းကတော. Animation softwareလို.ပြောလို.၇ပါတယ်။Discrete company ကထုတ်ပါတယ်။3ds max version 8 ကစပြီး Autodesk company ကဝယ်ပြီး စထုတ်တာ ဒီနေ.ထိအောင်ပါပဲ။Autodesk ကစထုတ်ကတည်းက &quot;object snap&quot;တွေပိုပြီးကောင်းလာပြီးတော.Architecture ပိုင်းပါပိုလုပ်နိုင် လာပါတယ်။
version 8 ပြီးတော.version9၊ 3ds max 2008 ၊3ds max 2009 &amp; 3ds max design 2009 ဆိုပြီးတော. animation နဲ. architecture presentation2ခုခွဲ ပြီး 2009 version မှာ ထုတ်ပါတယ်။ modeling ပိုင်းမှာ autocad ထဲမှာ 3d solid နဲ.ဆွဲ max ထဲ export လုပ် ပြီး rendering လုပ်တာနဲ.၊ autocad ထဲ 2dဆွဲ max ထဲ export လုပ် ပြီး max နဲ. 3d model လုပ်ပြီးrendering လုပ်တာ၇ယ်၊ max ထဲမှာပဲ အပြီးလုပ်တာ ၇ယ်လို.အမျိုးမျိုး လုပ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးနဲ. အထိေ၇ာက်ဆုံးကတော.autocad ထဲ 2dဆွဲ max ထဲ export လုပ် ပြီး max နဲ. 3d model လုပ်ပြီးrendering လုပ်တာပါပဲ(especially for architecture and engineer related field)။3ds max မှာ modeling လေ.လာမယ်ဆို၇င် အ၇မ်းကျယ်ပြန်.ပါတယ်။ architecture အတွက်ပဲလေ.လာမယ်ဆို၇င်တောင် စနစ်တကျနဲ.တစ်ကယ်တတ်ဖို.ကို အနည်းဆုံး 8လ 1နှစ်လေ.လာ၇မယ်။
3ds max ကို architecture ပိုင်းပဲ modeling ကိုစနစ်တစ်ကျအခြေခံ(beginner to intermediate)သင်မယ်ဆို၇င် ကျွန်တော.experience အ၇ တစ်ပတ်၃ ၇က် တစ်၇က်2hr နဲ. အနည်းဆုံး2လ၊ 2လခွဲလောက်သင်၇မယ်။3d presentation လိုင်းကိုလိုက်မယ်ဆို၇င် must be study လုပ်၇မှာပါ။
Rendering ပိုင်းမှာတော. Scanline render...Mental ray render ၇ယ်လို. build-in ပါပါတယ်။Scanline render ကဒီနိုင်ငံရဲ. သင်တန်းတွေနဲ့ အလုပ်တော်တော် များများ မှာသုံးနေ၊ပါတယ်။ သူ.၇ဲ. rendering times ကမြန်ပြီးတော. quality က autocad 14 to 2006 rendering quality လောက်ပါပဲ။အဓိကသုံးဖို.က animation အတွက်ပါ။...နောက်မှဆက်မယ်နော်...
တစ်ကယ်. international architecture &amp; engineer field မှာတော.3ds max Mental ray rendering engine နဲ. 3ds max မှာ plug-in အနေနဲ.သုံးတဲ. Vray render engine တွေကို သုံးပါတယ်။သူတို.၇ဲ. Quality ကတော. Realism (good ရှယ်)ပါပဲ။မသိ၇င် real photo လို.ထင်၇ပါတယ်။Mental ray ကတော. autocad 2008 &amp; 2009 မှာသုံးတဲ. Rendering engine နဲ.တူပါတယ်။Vray နဲ. Mental ray ကကောင်းတာနဲ.အမျှ Rendering times က Scanline render ထက် အများကြီး ပိုပါတယ်။Setting တွေ Idea တွေ approach method တွေများပါတယ်။Mental ray rendering နဲ.သင်တဲ.သင်တန်းမရှိသလောက်ပါပဲ။Vray လဲနည်းတူပါပဲ။ဒါပေမယ်. vray render သင်ပေးတဲ.သင်တန်းတစ်ချို.တော. ရှိပါတယ်။ ရှင်းရှင်း ပြော၇၇င် တစ်ကယ် မသင်ပေးနိုင်ပါဘူး။ learning cd တွေ sample cd တွေဝယ်ပြီး အကြမ်းသင်ပေးတာပါ။အဲဒီ learning တွေကိုတောင်သေသေချာချာ လေ.လာပြီး နားလည်အောင် သင်မပေးနိုင်ပါဘူး။International မှာ vray နဲ. mental ray user တွေ အပြိုင်ပါပဲ။Market leader ကတော. vray ပါ။ကျွန်တော် 3ds max9+ vray version 1.5...နဲ.လုပ်ထားတဲ. နမူနာ ပုံလေး လေ.လာ၇အောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။....ေ၇တိုက်ပါဦးဗျို....မောလို.ပါ။pls check link for autocad mental ray rendering photo..http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,935.msg8816.html#msg8816
အကိုရေ.. သရီးဒီမက်ကို အရမ်းကို စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။ လေ့လာဖို့လည်း ကြိုးစားနေပါတယ်။ မြန်မာလို ရေးထားတဲ့ စာအုပ်ကလည်း ၀ယ်လို့ မရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အကိုတို့ဆီမှာ ရှိရင် ဝေမျှပါအုံးနော်။ ကျေးဇူး
မြန်မာလိုစာအုပ်အကြောင်းကို &quot;autocad rendering&quot; topic ထဲမှာပြော ထားပါတယ်။Net က tutorials တွေနဲ. software မှာပါတဲ. help and tutorials
တွေကို စပြီး လေ.လာကြည်.ပါလား။နားမလည်တာရှိ၇င် ကျွန်တော် သိသလောက်ပြောပေးပါ.မယ်။Other member တွေလည်းကူညီ မယ်ထင်ပါတယ်။
Scanline render ကတော. ကျွန်တော်တို. မြန်မာပြည် မှာ အများဆုံးသုံး ပါတယ်။သူက မြန်ပြီးးတော. quality ကတော. realism မ၇ပါဘူး။လုပ်တတ်၇င်တော. တော်တော်ကောင်းတဲ.ပုံတွေ၇နိုင်ပါတယ်။အဓိက က Lighting နဲ. rendering engine ပါပဲ။
သူ.၇ဲ. lights တွေကို &quot;standard light&quot; လို.ပြောပါတယ်။Scanline render engine နဲ.လုပ်၇င် lights တွေ၇ဲ. intensity တွေကို အလင်းတစ်ခါ ပဲထိ
တယ် လို.ယူဆပါတယ်။ ပြောချင်တာ ကအလင်း ပြန် မကန်ပါဘူး။....coming soon...
Scan line၇ဲ.၇ည်ရွယ် ချက်ကိုက animation အတွက် နဲ. Quick render အတွက်ပါပဲ။တစ်ကယ်. stay render အတွက်ကတော. Mental ray and vray render engine ပါပဲ။...အဓိက အားသာချက်ကတော. GI &amp; FG (globle Illumination &amp; final gathering)တွေပါပဲ။(gi+FG)ကို &quot;Indirect illumination&quot;လို.ခေါ်ပါတယ်။အားနည်းချက်က... အချိန်ကြာ တာပါ။သူ.၇ဲ. Quality ကတော. ကောင်းတဲ.ပုံ ဆို Real photo ပါပဲ။
Autocad 2008/2009 ၇ဲ. rendering engine နဲ.တူပါတယ်။သူ.၇ဲ. lighting types တွေမှာ ကို &quot;photometric light&quot;တွေ (eg..40 ဝပ်4ပေ မီးချောင်း...60 ဝပ်မီးသီး...မာကျူ၇ီ မီးလုံးတွေ...etc)စသဖြင်. actual lights တွေပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမယ်. setting တွေကို ကောင်းကောင်း သုံးပြုနိုင်ဖို. ကို အများကြီးလေ.လာ၇မယ်...actual အပြင်က technical concept တွေပါ သိ၇င်ပိုပြီး လုပ်နိုင်မှာပါ။......
Cadtutor ၇ဲ. showcase forum ထဲမှာ 3ds max vray material အကြာင်း မေးထားဖြေထားတာလေး တွေပါ။ Win rar နဲ. zip လုပ်တင်လိုက်ပါတယ်။
တိုက်၇ိုက် ကြည်.ချင်၇င်တော. ဒီlink ကို သွားပါ။http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?t=28474 ..register တော.လုပ်ပြီး member login တော.၀င်၇ပါမယ်။
3DStudioMax စပြီးလေ့လာမယ့် လူများအတွက် ဒီစာအုပ်လေးကတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။
သို့သော် SFX &amp; Character 3D Animation, Game Design အတွက်တော့ အခြားစာအုပ်ထပ်ညွှန်ပေးပါမယ်...
ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲချင်ရင်တော့ ဒီမှာ http://www.noeman.org/gsm/e-books/33183-friendsofed-foundation-3ds-max-8-architectural-visualization-apr-2006-a.html ပါ...
E-Book ထက်ပိုပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန်လေ့လာလို့ရနိုင်စေမယ့် Video Tutorials တွေ လက်ဆင့်ကမ်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ...
ပြီးပြည့်စုံသောTutorials တွေလို့တော့ အရမ်းကြီးမပြောလိုပေမယ့်။ 3dsmax မှာလုပ်လေ့လုပ်ထရှိတဲ့ နည်းတွေ သုံးပြထားပါတယ်။
3dsmax ကို စပြီးလေ့လာတဲ့လူတွေ အားလုံးအတွက် အတော်လေးကောင်းပါတယ်လို့ပဲ ညွှန်းလိုက်ပါရစေ ခင်ဗျာ....
tensun3d.detail.building02.rar .001 download
tensun3d.detail.building01.rar .001 download
tensun3d.detail.building02.rar .002 download
tensun3d.detail.building01.rar .002 download
3d crazyေ၇...download links already lost.
sorry ပါ ခင်ဗျ။ ကျနော် တော့ အရင် အဲဒီကဟာတွေကို ဒေါင်းလုဒ် ဆွဲထားတာပဲ။
ကျနော့်ဆီမှာတော့ အဲဒီ ကျူတိုရီရယ်တွေ အကုန်ရှိတယ်။ ကျနော် အခြားနေရာက ထပ်ရှာပေးပါ့မယ် ခင်ဗျာ...
3ds max မှာ plug-in တွေအ၇မ်းများပါတယ်။ဒါကိုကသူ.၇ဲ. အားသာချက်ပါ။ကျွန်တော် သိထားတဲ. plug-in တွေအကြောင်း ပြောပြချင်ပါသေးတယ်။
အဲခက်တာက 3ds max version ကိုလိုက်ပြီး plug-in တွေကိုလဲ update version တွေပြောင်းလဲတင်ပေး၇တာတော. မလွယ်ပါဘူး။
plug-in type တွေအမျိုးမျိုး၇ှိ နေတော. archi ပိုင်းနဲ.ပတ်သတ်တဲ. ဟာတွေပဲ ပြောပါ.မယ်။
ပထမဆုံးကတော. render plug-in ဖြစ်တဲ. vray ပါ။...coming soon
Lighting အမျိုးအစားက 3ds max ရဲ့ rendering engine type ပေါ်မှာမူတည်ပြီး အမျိုးမျိုး ကွဲပြားပါတယ်။ကိုသီဟပြောတဲ့
Target spot, Target direct, Onmi lights တွေက &quot;scanline&quot; render engine နဲ့ တွဲသုံးလေ့ရှိပါတယ်။Mental ray ဆိုရင်တော. အခုနက
Lights တွေအပြင် MR spot,MR sun,mr sky..Ies ..etc စသဖြင့် ၊ vray ဆိုရင်လည်း vray lightsတွေ...eg..vray plane...etc...အမျိုးမျိုး
သုံးနိုင်ပါတယ်။..ကိုသီဟ သုံးတဲ့ software version ပေါ်လဲမူတည်ပါသေးတယ်။...ဖြစ်နိုင်ရင် လုပ်ထားတဲ့ပုံလေးတွေတင်ပေးပြီး...မေးရင်ပိုထိရောက်
:) 3d max အကြောင်းကို ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်.ကျွန်တော်မှာ ပြန်စာမရေးတတ်တာရယ် .တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမယ်ဆိုတာ မသိလို့ပါ။ကျွန်တော်သိသလောက် မျှဝေခံစားပါမယ်။ ကျွန်တော်ကို ဆွေးနွေးခွင့်ရဖို့ ကူညီပေးပါရန် တောင်းဆိုပါတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရင် အဆင်ပြေမလဲဆိုိတာ
တစ်ချို့အရာတွေလည်း ဆွေးနွေးခွင့်လည်းရချင်ပါတယ်.။ကျွန်တော်မှာ 3d max နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး rending လုပ်ထားတဲ့ ပုံတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
အခုလိုဆွေးနွေးမယ့်သူ ပေါ်လာတာ ဝမ်းသာစွာနဲ့ကြိုဆိုပါတယ်။Amoine သိတာလေးတွေဒီမှာပဲဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
ပုံတွေလဲတင်ပြီးဆွေးနွေးရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ ... :) :)
အစ်ကိုေ၇့..ကျနော် vray plus-in လေးလိုချင်လို့ပါ...ကူညီပါဦးနော်.. ;D
3ds max ဘယ် version နဲ့ တွဲသုံးမှာလဲဗျာ။...3ds max version ပေါ်မူတည်ပြီး vray version တွေမတူလို့ပါ။
3Ds max9 နဲ့ပါ...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
ဒီမှာ download လုပ်ပါ။ ...http://www.zshare.net/download/12377040d5611510/
;Dကိုချန်းရေ ဒီ tutorials တွေနဲ့ အကျိုးမပေးဘူးထင်တယ်။
Download လုပ်ပြီး zip ဖြည်တာ 70% လောက်ဆိုerror တွေပဲဖြစ်ပြီး
ထွက်သွားတယ်။...သူပြထားတဲ့ MB အတိုင်းလည်း download လုပ်ထားတယ်။
မရဘူးဖြစ်နေလို့ check လုပ်ပေးပါဦး ...အချိန်ရခဲ့ရင်ပေါ့။ :) :)
= 25 mb
3ds max modeling အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်...overall အနေနဲ့
Patch Surface Modeling နဲ့
NURBS modeling ရယ်လို့ရှိပါတယ်..
များသောအားဖြင့်ှSpline Modeling , Poly modeling , Poly modeling တွေနဲ့ အဆွဲများပြီး..
Patch Surface Modeling နဲ့ NURBS modeling တွေကို Advance modeling ရယ်လို့ အကြမ်းအားဖြင့်မှတ်ယူလို့ရပါတယ်..ဆက်ပါ့မယ်... :)
spline modeling ကတော့ 2d modeling အတွက် မရှိမဖြစ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်..
ရှုပ်ထွေးတဲ့ 3d model တော်တော်များများအတွက် သူ့ကို အခြေခံပြီးဆွဲတာများပါတယ်..
အများဆုံးသုံးတဲ့ spline အတွက် tools လေးတွေကတော့ line, arc,circle,rectangle,star,..text စသဖြင့်ပေါ့နော်..
သူတို့နဲ့ ဆွဲလို့ရတာလေးတွေကို 3ds max မှာ shape တွေရယ်လို entity ခွဲထားပါတယ် ..
အဲဒီ shape တွေကို တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ပေါင်းစပ်နိုင်သလို rotate,copy,scale ..နဲ့ edit လုပ်လို့ရရပါတယ်..
သူ့မှာ ..(vertex , segment , spline ) ရယ်လို့ sub level တွေခွဲပြီး edit လုပ်လို့ရပါတယ် ... :)
poly modeling နဲ့ mesh modeling ကတော့ အဓိက အခြေခံ 3D တွေဖန်တီးပြီးရင် မရှိမဖြစ် edit လုပ်ရမယ့် Tools တွေပါ..
.spine modeling နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ shape တွေကို modifier ( eg..extrude,lathe..)တွေသုံးပြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ်..poly ပြောင်းပြီး..extrude လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်.
.ဒါမှမဟုတ် direct ပဲ..3D tools တွေနဲ့ (eg..box,cylinder..).
စသဖြင့် 3D Model တွေရလာတဲ့ အခါ လိုချင်တာတွေ အသေးစိတ်အတွက် edit လုပ်ဖို့ poly , mesh ..patch..တွေ
ပြောင်းပြီး လိုချင်တာရအောင် ဆွဲနိုင်ပါတယ်..poly မှာ vertex , edge ,border ,poly ,element ရယ်လို့
sub level တွေ အထိဆင်းပြီး စိတ်ကြိုက် edit လုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်..
.ဒါကလဲ 3ds max ရဲ့  အဓိက အရေးပါတဲ့ အားသာချက်တစ်ခုပါပဲ.....ဆက်ပါ့မယ် :)
နောက် ထပ်ရှိသေးတာတွေက တော့...spline ကို အခြေခံထားတဲ့ ..path နဲ့ NURBS( Nonuniform rational B-Spline ) modeling ပါ..
path က တော့ ပိုပြီးတော့ အကွေးအကော့တွေအတွက် ပျော့ပြောင်းအဆင်ပြေပါတယ်.
.အထုးသဖြင့် surface modifer နဲ့ ဆွဲထားလို့ရလာတဲ့
model က path ပါပဲ...ထို့ အတူ NURBS 0bject တွေနဲ့ အဓိက ဆွဲလို့ အဆင်ပြေတာတော့...car bodies and ship hulls တို့ စသဖြင့်
charater ဆန်တာမျိုးတွေ အတွက် သုံးတာများပါတယ်.
..ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီအပိုင်းတော့ သေသေချာချာ ..သိပ်မလုပ်..မလေ့လာမိသေးပါဘူး... :)
နောက်ထပ် အရေးပါတာ ကတော့ အခြေခံအားဖြင့် သိကို သိထားသင့်တဲ့..Predefined primitives တွေပါ...
ကိုယ်လိုချင်တဲ့ model အတွက် spline နဲ့ သေသေချာချာဆွဲပြီး..modifier တွေနဲ့ တစ်ဆင့်ဆီဖန်တီး..
နိုင်သလို ..box ,,cylinder လိုမျိုး..ကြိုတင် အလွယ်တစ်ကူဆွဲနိုင်အောင် ဖန်တီးထားတဲ့ command တွေကို
.Predefined primitives လို့ဆိုပါတယ်...ရိုးရိုးရှင်းရှင်းကတော့ ...standard Predefined primitives ပေါ့..
နဲနဲ ရှုပ်တာမျိုးကြတော့...Predefined Extended Primitives ပေါ့....
* Box — box producesarectangular prism. An alternative variation of box is available — entitled cube — which proportionally constrains the length, width and height of the box.
* Cylinder — cylinder producesacylinder.
* Torus — torus producesatorus — oraring — withacircular cross section, sometimes referred to asadoughnut.
* Teapot — teapot produces the Utah teapot. Since the teapot isaparametric object, the user can choose which parts of the teapot to display after creation. These parts include the body, handle, spout and lid.
* Cone — cone produces round cones — either upright or inverted.
* Sphere — sphere producesafull sphere, hemisphere, or other portion ofasphere.
* Tube — tube can produce both round and prismatic tubes. The tube is similar to the cylinder withahole in it.
* Pyramid — The pyramid primitive hasasquare or rectangular base and triangular sides.
* Plane — The plane object isaspecial type of flat polygon mesh that can be enlarged by any amount at render time. The user can specify factors to magnify the size or number of segments, or both. Modifiers such as displace can be added toaplane to simulateahilly terrain.
အနောက်က ရှင်းလင်းချက်တွေတော့ မြန်မာပြန်တာထက် ဒီတိုင်းက ပိုရှင်းမှာပါ...
* Hedra — produces objects from several families of polyhedra.
* ChamferBox — createsabox with beveled or rounded edges.
* OilTank — createsacylinder with convex caps.
* Spindle — createsacylinder with conical caps.
* Gengon — creates an extruded, regular-sided polygon with optionally filleted side edges.
* Prism — Createsathree-sided prism with independently segmented sides.
* Torus knot — createsacomplex or knotted torus by drawing 2D curves in the normal planes arounda3D curve. The 3D curve (called the Base Curve) can be eitheracircle oratorus knot. It can be converted fromatorus knot object toaNURBS surface.
* ChamferCyl — createsacylinder with beveled or rounded cap edges.
* Capsule — createsacylinder with hemispherical caps.
* L-Ext — creates an extruded L-shaped object.
* C-Ext — creates an extruded C-shaped object.
* Hose —aflexible object, similar toaspring.
ပုံမှန် အားဖြင့် 3ds max မှာ scanline နဲ့ mental ray ရယ်လို့ rendering engine တွေ default အနေနဲ့ ပါပါတယ်..
vray ကတော့ သပ်သပ် install လုပ်မှပါ။ သူ့ကို install လုပ် crack ဖြည်ပြီးတဲ့ အခါ ပုံမှန် အားဖြင့် ဘယ်ကနေခေါ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတတ်ပါတယ်..
render setting( F 10 ) နှိပ်ပြီး..အောက်ဆုံးက assign render မှာ click လုပ်ပြီး..vray ကိုရွေးလိုက်မှ rendering setting တွေဟာ Vray setting တွေ change သွားမှာပါ..
max မှာ ပုံမှန်အားဖြင့် scanline နဲ့ တွဲသုံးတဲ့ material တွေကို standard လို့ ခေါ်ပြီး...vray မှာလည်း render လုပ်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်..အကောင်းဆုံးကတော့ vray material တွေပဲသုံးပါ..
အဲ...standard material တွေကို mental ray နဲ့ တွဲသုံးလို့ကတော့ ဘာမှမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး...ထို့အတူပဲ mental ray material တွေ vray material တွေကိုလဲ scanline rendering engine
နဲ့ဆို မြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး...ဒါလေးတွေကလဲ သိထားသင့်တဲ့ အချက်တွေပါပဲ..ဆက်ပါ့မယ်.. :)
Vray မှာ အပိုင်းကြီး ၃ ပိုင်းနဲ့ အပိုင်းငယ်လေး တွေဖွဲ့စည်းပါဝင်ပါတယ်။
a.ပုံမှန် vray material နဲ့
b. အထူးပြုလုပ်ချက်ပါတဲ့ vray material ( eg..vraylight material ,vraydirt...etc)
များသောအားဖြင့် shader လို့ခေါ်ကြပါတယ်...
3..Lights ( vray sun , vray lights &amp; IES )
နောက်...vray plane လို rendering အတွက် modeling command နဲ့
vray displacement လိုမျိုး modifier တွေ ပါပါတယ်..
ဒါအကြမ်းဖျင်းသဘောပါ...လေ့လာကာစအနေနဲ့ ဒီလောက်တော့ သိထားရပါမယ်... :)
vray material လုပ်နည်းလေးနဲ့ သူရဲ့  အဓိပ္ပါယ် အကျဉ်း လေးတွေပုံလေးတွေလုပ်ပြီး
တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...ပုံ ၁ မှာ standard က နေ vray material ခေါ်ပြီးလုပ်သွားပုံနဲ့
ပုံ ၂ မှာ ရလာတဲ့ vray material ရဲ့ setting လေးတွေ ( color ရွေးပုံ ၊ texture ချိတ်ပုံ ၊ အလင်းပြန်ပုံ ၊ အလင်းဖောက်ပုံ ချိန်တဲ့ ခလုတ်လေးတွေ)
ရေးပေးထားပါတယ်...၂ ပုံလုံးမှာmaterial ကို နာမည်ပေးခဲ့ဖို့မမေ့အောင်အနီရောင်နဲ့ ကွင်းထားပေးပါတယ်.. :)
PS...ရှေ့မှာပြောခဲ့သလို rendering setting dialogbox ကနေ vray render engine ပြောင်းထားဖို့မမေ့ပါနဲ့...
အကြမ်းဖျင်းအရ ...Vray Material လုပ် နာမည်ပေး...
Stainless Steel လုပ်ချင်ရင် ... Color ကို အနက်စစ်စစ်ပေး ...
ပြီးရင် Reflection တန်ဖိုးကို အဖြူအပြည့်ပေး..
ဒါဆို Rectangle Shape Flat Geometric Object တစ်ခုကို အဲဒီ Material ကပ်ရင် Mirror ပေါ့...
လေးထောင့်တုံးတို့ .. Cylinder တို့ဆိုရင် Stainless Steel ပေါ့..
လေးထောင့်တုံးမှာ Reflection အရိပ်က မှန်လိုမကြည်ချင်ရင်.. Reflection အတွက် .. Glossiness မှာတန်ဖိုးကို တစ် ထက်နည်းအောင်လျှော့သွားလေ.. ၀ါးလေလေပေါ့..
ဒီပုံလေးနဲ့ သူ့ရဲ့ material setting လေးတွေကြည့်ရင် တော်တော်အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်..
mirror ကတော့မထည့်တော့ဘူးနော်..အထက်ကပြောသလို စတီးမှာ glosiness ကို 1 ပဲထားရင် mirror ပဲလေ..
အစ်ကိုရေ အဲ့ဒီ စာအုပ်ကို ဒေါင်းလို့ မရဘူး ဖြစ်နိုင်ရင် ပြန်တင်ပေးပါလား ဟင်..
အစ်ကိုရေ မြန်မာလိုစာအုပ်အကြောင်းကို AutoCAD Rendering မှာ ရှာတာ ရှာလို့ မတွေ့ဘူးဖြစ်နေပါတယ်.. အဲ့ဒါလေး လိုချင်ပါတယ်နော်..
ကျွန်တော့်မှာ ရှိတဲ့ 3ds Max မြန်မာလို စာအုပ်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ... ရှိပြီးသားဆိုရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ပါ.... ပထမတွဲဘဲ ကျွန်တော့်မှာ ရှိပါတယ်
Credit to : KO Nay Zaw Win Maung
ကို papagyi ရေ...။
Building တစ်လုံးထဲကို FPS (First Person Shooter) Game တွေထဲကလို W,S,A,D Key တွေသုံးပြီး ၀င်ထွက်လှည့်ပတ်ချင်တယ်ဆိုရင် 3Ds Max မှာ လုပ်လို့ ရ မရ သိချင်ပါတယ်။ Youtube မှာရှာတာ Game Engine တွေနဲ့ ချည်း တွေ့ နေရတယ်။
ကျွန်တော့်ရည်ရွယ်ချက်က Revit မှာ Building တစ်လုံးဆောက်မယ်။ ပြီးရင် 3Ds Max ကိုပို့ မယ်။ နောက် 3Ds Max မှာ အဲဒီ W,S,A,D Key တွေသုံးပြီး FPS Game တွေလို ၀င်ထွက်လှည့်ပတ်လို့ ရတဲ့ အခြေခံ Game ကလေး လုပ်ချင်တာ။
တခြား လွယ်တဲ့နည်းတွေရှိရင်လည်း သိပါရစေ။